Maninona ny varotra B2B mahomby no làlana tokana alefa amin'ireo mpamokatra sy mpamatsy Post COVID-19 | Martech Zone
Maninona ny varotra B2B mahomby no làlana tokana alefa amin'ireo mpamokatra sy mpamatsy Post COVID-19
Alakamisy, Desambra 17, 2020 Alakamisy, Desambra 17, 2020 Rajneesh Kumar
Ny areti-mandringana COVID-19 dia nahatonga ny tsy fahazoana antoka eo amin'ny tontolon'ny asa ary niafara tamin'ny fanakatonana hetsika ara-toekarena marobe. Vokatr'izany, ny orinasa dia mety hahita ny fiovan'ny paradigma amin'ny rojom-panolorana, ny maodely miasa, ny fitondran-tenan'ny mpanjifa, ary ny paikady momba ny fividianana sy ny varotra.
Zava-dehibe ny fandraisana fepetra mavitrika hametrahana ny orinasanao amin'ny toerana azo antoka ary hanafainganana ny fizotry ny fanarenana. Ny faharetan'ny asa aman-draharaha dia afaka mandeha lavitra amin'ny fampifanarahana ny toe-javatra tsy ampoizina ary hiantohana ny faharetana. Indrindra ho an'ireo mpilalao amin'ny sehatry ny famatsiana varotra B2B, ny fotoana tsy azo antoka toa izao dia mety hanolotra a saka eo amin'ny rindrina toe-javatra. Mety hiatrika fivontosana eny an-tsena ianao na mahita fa sarotra ny mahita ny fitaky ny fangatahana. Na dia mety hampahory ny toe-javatra roa tonta, ny mpanamboatra sy ny mpaninjara dia afaka miantehitra amin'ny fitohizan'ny asa aman-draharaha sy ny faharetana mba hanoherana ny fanamby ary hiantohana ny famatsiana tsy misy sakana amin'ny areti-mifindra amin'ity habe sy refy ity.
Ny zava-misy ankehitriny dia nanery ny orinasa hanao fanovana ara-drafitra amin'ny paikadim-barotra any an-tsena. Ireto misy sehatra ifantohana manan-danja izay afaka manampy anao hiantoka ny fitohizanao ary hanangana endrika azo ahitsy mandritra ny krizy ara-pahasalamana manimba indrindra amin'ity taonjato ity.
Famerenana ny voina - Ny orinasa dia tsy maintsy manombatombana ny fiantraikan'ny areti-mandringana amin'ny fahaiza-miasa. Ho valin-kafatra eo noho eo, ny ankamaroan'ny orinasa dia nanangana ivon-toeran'ny varotra sy ekipa miasa miampita mba hampihenana ny fiantraikan'ny valanaretina amin'ny asa fivarotana. Nanao fanitsiana ihany koa izy ireo toy ny fehezan-dalàna mifehy mba hanohanana ireo mpiara-miasa amin'ny fantsona. Na dia afaka manampy amin'ny tanjona eo noho eo aza ireo fandraisana andraikitra ireo, dia ilaina ny fandaminana sy ny fanatanterahana tsara ny fanarenana maharitra.
Fampitana nomerika voalohany - Ny varotra B2B dia azo ovaina ifotony amin'ny aorian'ny post-COVID-19 miaraka amin'ny fifantohana miova avy any ivelan'ny Internet mankany amin'ireo mpanelanelana nomerika. Ny areti-mandringana dia nanome lanja ny fizotry ny digitalization amin'ny varotra. Raha mahita mialoha ny fitomboan'ny fifanakalozan-kevitra dizitaly ny orinasan'ny B2B ato ho ato, dia tsy maintsy jerenao ny hetsika varotra rehetra hahalalana ny fotoana mety hisian'ny automatique nomerika. Mba hanatsarana ny traikefa niomerika dia alao antoka fa afaka mahita fampahalalana vonona amin'ny tranokala ny mpividy ary mampitaha ny vokatra sy ny serivisy. Tokony hamboatra olana ara-teknika koa ianao amin'ny fotoana tena izy ary mitady fomba vaovao sy vaovao hanatsarana ny traikefan'ny mpanjifa.
Mieritrereta indray ny lalao ataon'izy ireo - Ireo mpamatsy manome traikefa niomerika azo antoka sy namboarina miaraka amin'ny fifantohana mitombo amin'ny hafainganana, ny mangarahara ary ny fahaiza-manao dia mety ho sitrana haingana kokoa ary hampitombo ny fototr'ireo mpanjifany. Amin'ity ezaka ity dia tsy maintsy mampiasa teknolojia ianao ary mampahafantatra ireo endri-javatra mahaliana ny mpanjifa toy ny resaka mivantana izay afaka manampy amin'ny fahatakarana ny fepetra takiana manokana ary hamaly haingana. Ho fanampin'ny fifandraisana amin'ny tranokala dia manantena ny hitombo ny fifamoivoizana amin'ny fampiharana finday sy ny vondrom-piarahamonina media sosialy. Noho izany, amin'ny ara-dalàna vaovao dia mila manova fanovana tanteraka amin'ny paikadin'ny varotra ianao mba hahafahanao manararaotra ny fotoana mety indrindra amin'ny tontolon'ny virtoaly.
eCommerce sy fiaraha-miasa nomerika - Ny krizy ankehitriny dia manararaotra manitatra ny eCommerce sy ny fahaizanao nomerika. Ny eCommerce dia antenaina hanana anjara toerana lehibe amin'ny dingana fanarenana ary amin'ny dingana manaraka amin'ny fitomboana. Raha tsy manana fahaiza-manao nomerika ny orinasanao dia mety tsy hahita fotoana tsy manam-paharoa ianao eo amin'ny tontolon'ny Internet. Ny orinasa B2B izay efa nanambola tamin'ny fananganana eCommerce sy fiaraha-miasa niomerika dia afaka mijery ny tombony amin'ny fitomboan'ny dian-tongotra amin'ny alàlan'ny mpampita virtoaly.
Fivarotana lavitra - Mba hampihenana ny fiatraikany amin'ny varotra, ny ankamaroan'ny orinasa B2B dia nanatri-maso ny fifindrana amin'ny maodely varotra virtoaly nandritra ny areti-mandringana. Ny fanamafisana ny fivarotana lavitra sy ny fifandraisana amin'ny alàlan'ny videoconferansa, webinar ary chatbots dia nitombo be. Raha misy orinasa miantehitra tanteraka amin'ny medium virtoaly hanoloana ny varotra an-tsaha, ny sasany kosa mampiasa ny matihanina mivarotra miaraka amin'ny varotra amin'ny Internet. Ny fantsona lavitra indrindra hita fa mahomby mitovy na mahomby kokoa amin'ny fanatonana sy fanompoana ny mpanjifa. Araka izany, ny fampiasana fantsona lavitra dia mety hitombo na dia mihamora aza ny fameperana ny dia ary miverina amin'ny toeram-piasany ny olona.
Sourcing hafa - Ny fanakorontanana goavambe eo amin'ny sehatry ny famatsiana mandritra ny Covid-19 dia nanamafy ny filan'ny orinasa hampihatra ny fanovana ny paikadim-bola. Ny fikorontanana eo amin'ny rojo famatsiana dia nanelingelina ny fividianana akora azo avy amin'ireo mpivarotra nifanarahana, indrindra ireo tranga izay nahitana loharano manta teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Mba hialana amin'izany fanamby izany dia mila mijery mpivarotra eo an-toerana ny orinasa mba hividy akora. Ny fiarovana fifanarahana amin'ireo mpivarotra eo an-toerana dia afaka manampy amin'ny fisorohana ny fahatarana amin'ny famokarana sy ny fitsinjarana. Mety ilaina ihany koa amin'ity sehatra ity ny mamantatra ireo vokatra sy fitaovana hafa.
Ny drafitra fitohizan'ny asa sy ny fampiasam-bola maharitra - Ho an'ny varotra B2B, fotoana mety izao hikolokoloana fitarihana sy hanaovana fampiasam-bola maharitra. Araho ary tazomy ny fifandraisana tsy tapaka miaraka amin'ireo vinavina ao amin'ny fantsona ary fantaro ireo fotoana maharitra. Ampahafantaro azy ireo ny momba ny drafitra azo ihodinanao sy ny dingana hataonao hiantohana ny fitohizanao. Tsy maintsy ovaininao tsikelikely ny fifantohanao amin'ny valinteny vonjy maika ho maodely maharitra amin'ny faharetana miasa. Amin'ity fizotrany ity, manaova drafitra fitohizan-kery matanjaka mba hianarana lesona amin'ny krizy ankehitriny. Ianao koa dia tsy maintsy manombana ny loza mety hitranga amin'ny asa aman-draharaha mitsikera sy manao fanazaran-tena momba ny drafitra. Ny fampivelarana ny fahaizan'ny faharetana dia afaka manampy amin'ny fiatrehana hetsika tsy mbola fahita ary miverina amin'ny raharaham-barotra tany am-boalohany izay tsy misy akony firy amin'ny asa.
Farito ny anjara andraikitry ny reps vaovao - Ny fiovana amin'ny fanaovana nomerika dia tsy misy fiantraikany amin'ny andraikitry ny solo-barotra izay takiana ankehitriny hahafantarana ireo fitaovana nomerika toa ny Zoom, Skype, ary Webex. Ireo matihanina amin'ny varotra miasa amin'ny tontolon'ny B2B dia tsy maintsy mahatakatra fitaovana an-tserasera isan-karazany hiatrehana sy hamaly ny fanontanian'ny mpanjifa amin'ny fomba mahomby. Rehefa miomana amin'ny fitomboan'ny varotra nomerika ianao dia fantaro ny fomba tsara hampiofanana sy hampielezana ireo matihanina amin'ny varotra amina fantsona maro hanomezana tolotra ho an'ny mpanjifa sy fanampiana. Ny fiofanana sy ny fampiasam-bola amin'ny mpiasao dia azo antoka fa hijinja valiny mandritra ny fotoana maharitra.
Aza miandry ny fiafaran'ny areti-mandringana
Nilaza ny manam-pahaizana fa mety hijanona ao amintsika mandritra ny fotoana maharitra ny coronavirus ary hitohy hiely mandra-pivoaran'ny vaksinina hamongorana azy. Rehefa mitady hanangana sy manomboka ny asany miaraka amina mpiasa voafetra sy fitandremana ilaina ireo fikambanana, dia ilaina ny mampifanaraka ny asa rehetra amin'ny fepetra vaovao.
Ny orinasa dia tokony hampiasa fomba mavitrika ary hanaraka drafitra napetraka hiantohana ny fitohizan'ny asa ary hisorohana ny fikorontanan'ny rojom-pamokarana. Mitehiriza lisitra vonona ary miomàna mialoha mba tsy ho diso anjara amin'ny varotra varotra. Satria mety ho haingana kokoa noho ny nantenaina ny fanarenana ara-toekarena amin'ny fotoana aorian'ny COVID-19, dia tokony hampiasa ity fotoana ity ianao hiomanana amin'ny fangatahana mihoampampana. Tadidio fa raha tsy manomboka izao ianao dia mety tsy ho afaka hanararaotra ireo fotoana mety hiseho amin'ny fotoana mety.
Tags: sourcing hafavarotra b2becommerce b2bvarotra b2bdrafitra fitohizan'nyCovid-19fiaraha-miasa nomerikafomba nomerika voalohanyfanarenana ny lozafiaraha-miasa eo amin'ny ecommercefanarenana toe-karenalisitrafampitaovanafampiasam-bola maharitrampanamboatraareti-mifindrafamerenanafivarotana lavitrampamatsy
Mpivarotra nomerika sy mpijirika fitomboana, Rajneesh Kumar no lohan'ny marketing nomerika ao amin'ny Pimcore Global Services. Pimcore dia sehatra orinasa open source natambatra nahazo mari-pankasitrahana ho an'ny fitantanana angona angona (PIM / MDM), fitantanana traikefa ho an'ny mpampiasa (CMS / UX), fitantanana fananana nomerika (DAM), ary eCommerce.
Fampiasana ny AI an'ny tompon'ny BlueOcean hamaha ny fahitana marika mifandraika amin'ny fifandraisana